बोर्डिङ कि बोरिङ ?
बरिष्ठ अधिवक्ता शिव सिग्ेदल -
जुन स्कुलमा पढेको छ, त्यही स्कूलमा वर्षैपिच्छ भर्ना हुने भनेको के हो ? योभन्दा ठगीधन्दा अरु हुन्छ कि हुन्न ?
यतिमात्र होइन, दुई महिना बिदा भयो, बच्चा घरमा आएर बसेको छ, स्कूल जाने बेला भयो, स्कूलले बील पठाएको छ । बिदा भएको महिनाको पनि खाना, बस्ने, सरसफाइदेखि सबै प्रकारका बिल पहिले चुक्ता गर्नुरे । योभन्दा निर्लज्ज धन्दा अरु के हुन्छ ? यस्ता स्कूलले कस्तो नैतिक शिक्षा दिन्छ होला, अचम्म लाग्छ ।
एक जमाना थियो, पास फेल जे भए पनि धेरै पढ्नु भनेर पढ्न उत्साह दिइन्थ्यो र असल बन्नु भनिन्थ्यो । अहिलेको शिक्षाले असल होइन, अब्बल नम्बर ल्याउने घोकन्ते शिक्षामात्र दिइरहेको छ र पैसा अशुलिरहेछ ।
स्कूलभन्दा ठूलो व्यापार अरु के हुनसक्छ, नेपालमा ? त्यसै कुनै बेला सुन तस्कर भनेर चिनिने कालु मनांगेदेखि ठूले तस्करसम्म स्कूल खोलेर सुती सुती कमाइरहेका छन् ।
यो देशको शिक्षाका ३ हस्तीहरु बाबुराम पोखरेल, गीता रानादेखि उमेश श्रेष्ठसम्मले ५ करोडभन्दा बढी चन्दा दिएर सांसद भए । एउटा स्कूल सञ्चालकले ५ करोड चन्दा दिने हैसियत विद्यार्थी र अभिभावकसँग ठगेरै हो, कुन हदको ठगी हुँदोरहेछ ?
शिक्षा व्यापार बनेको छ । स्कूल ज्ञान मन्दिर हुनुपर्ने हो, माफियागिरी पो चलिरहेको छ । टाई र सुट लगाइदियो, नेपाली विषय जेसुकै होस्, अंग्रेजी बोल्न सिकाइदियो, जति लुटे पनि भयो । यो लज्जाको विषय हो, तर कम्युनिष्ट सरकार जनतामाथिको, देशमाथिको शोषण र घात टुलुटुलु हेरिरहेको छ किन ?
चुरो कुरो शिक्षा र स्वास्थ्यमा सबैभन्दा लगानी बढी कम्युनिष्ट नेता कार्यकर्ताकै रहेछ । बोल बोल मछली मुखभरि पानी । बोल्दा पार्टीमा अलोकप्रिय भइने, नबोल्दा चन्दा आउने, भोट बैंक पनि बलियो रहने । कम्युनिष्ट सरकार त्यसै कमाउनिष्ट सरकार बनेको होइन रहेछ ?
व्यापारमुखी शिक्षालयले केही व्यक्ति मोटाउने र देशको भविष्य अन्धकार पार्ने कामा गरिरहेको छ । जब शिक्षालयमा नैतिकशिक्षालाई महत्व दिइन्न, देशको भविष्य कसरी उज्यालो हुनसक्छ ? यसतिरको सोच खोई ?
शिक्षा ऐन छ, कसले पालना गरेको छ ? एउटा जाबो प्रश्नपत्रको सुरक्षा गर्न नसक्ने शिक्षा मन्त्रालयको शिक्षा विकासको गफमात्र हो । शिक्षा कम्युनिष्ट सिण्डिकेटमा चलिरहेको छ, सिण्डिकेट शिक्षा भनेको दलाली थलो हो । दलाली थलोका कारण नेपालको भाग्य र भविष्य अन्धकाकर बन्दैछ ।